Maxay Apple Watch-keyga ku sameyn karaa WiFi oo keliya? | Wararka IPhone
Apple Watch waa wehel ku habboon iphone-keena. Waxay noo oggolaan doontaa inaan ogaanno wax walba oo ku dhaca taleefannadeenna casriga iyadoo kaliya aan fiirineyno curcuraheenna. Laakiin Maxaan ku samayn karnaa Apple Watch-keena haddii aanan haysan taleefannadeenna iPhone-ka u dhow?
Horey ayaa loo ogaa inaan awoodno, tusaale ahaan, inaan orod la'aan ku tagno iPhone la'aanteena iyo Apple Watch waxay sii wadi doontaa inay ahaato mid aad u sax ah marka la cabirayo masaafada iyo kalooriyada la isticmaalay inta lagu guda jiray howlaheena jireed, in kastoo awooddan ay tahay in "la barto" kadib waxaan dhowr jeer u baxnay inaan isboorti la sameysanno iyadoo iPhone-keena dusha saaran. Qoraalkan waxaan uga hadli doonnaa waxa waxa ay Apple Watch sameyn karto oo ku xiran shabakad Wifi ah (Caqli ahaan, sheegista waqtiga ayaa ka mid ah).
1 Soo dir oo soo dir fariimaha
2 U dir oo hel sawirada iyo taabashada dhijitaalka ah
3 Abuur xusuusin
4 Abuur dhacdooyinka kalandarka
5 Hel jawaabaha su'aalaha aasaasiga ah
6 Hubi cimilada, cayaaraha, filimada iyo suuqa saamiyada
7 Waa hago
Soo dir oo soo dir fariimaha
Sida iPad ama iPod Touch, Apple Watch way awoodaa hel fariimaha adigoon ku xirneyn iPhone. Tani waxay ka dhigan tahay inaan ka tagi karno iPhone-ka ku shubista hal qol, aan aadno guriga kale darafkiisa oo waxaan sii wadeynaa inaan helno farriimaha illaa iyo inta aan ku xirnahay shabakad WiFi ah. Wicitaanada, FaceTime sida caadiga ah, waxaan u baahan doonaa iPhone ku xiran.
U dir oo hel sawirada iyo taabashada dhijitaalka ah
Ma jiraan wax la yaab leh oo ku saabsan arrintan ka dib markii la ogaaday qodobka hore. Waxaan soo diri karnaa sawirro iyo taabasho dhijitaal ah oo ku xiran shabakad WiFi ah iyadoo aan loo baahnayn in IPhoneku u dhow yahay.
Waxaan abuuri karnaa xasuusiyaal aan iPhone-keena ku xirneyn, kaliya isticmaalka shabakada WiFi, laakiin waxaa loo maareeyaa si ka duwan. Waxa caadiga ah ee aaladaha kale ayaa ah inay u soo dhigaan iCloud si ay ugu heli karaan dhammaan aaladahayaga, laakiin Apple Watch ayaa kaydin doonta xusuusiyeyaasha gudaha si ay ula jaanqaadaan iPhone-ka markii lagu xidho.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, Apple Watch ayaa ku soo ogeysiin doonta marka waqtigii aan horey u dejinay xusuusiyaha uu yimaado, xitaa haddii aanaan kala shaqeyn iPhone-ka.
Abuur dhacdooyinka kalandarka
Si la mid ah sida aan u abuuri karno xusuusin, waxaan sidoo kale u abuuri karnaa dhacdooyinka kalandarka. Iyaga ayaa lagu keydin doonaa gudaha illaa inta lagala shaqeynayo iPhone-ka, xilligaas ayaa loo soo dirayaa iCloud iyo, haddii aynaan is waafajin, waxay na soo ogeysiin doontaa marka waqtigu yimaado.
Hel jawaabaha su'aalaha aasaasiga ah
Waxaan weydiin karnaa Siri su'aalo badan oo aasaasi ah iyo, xaalado badan, waxay awood u yeelan doontaa inay na siiso jawaab xitaa haddii aanaan haysan Apple Watch oo ku xiran iPhone-keena. Su'aalaha sida:
Waa maxay caasimada Jarmalka?
Immisa qof ayaa ku nool San Diego?
Goorma ayuu dhashay Leo Messi?
Waa maxay qeexitaanka 'hypotenuse'?
Hubi cimilada, cayaaraha, filimada iyo suuqa saamiyada
Sida su'aalaha aasaasiga ah iyo si la mid ah sida aan u weydiino iPhone, waxaan sidoo kale hubin karnaa cimilada, isboortiga, filimada iyo suuqa saamiyada iyadoo la adeegsanayo shabakad WiFi ah. Su'aalaha sida:
Waa maxay filimada aad sameyneyso caawa?
Waa sidee jawigu magaalada Madrid?
Sidee ayuu ku socdaa kulanka Valencia?
Waa imisa saamiyada Apple?
In kasta oo aanaan haysan IPhone-ka ku xidhan Apple Watch-keena, haddana waxaan u adeegsan karnaa aaladda Remote-ka ee Apple TV, illaa iyo inta aan ka shaqeyneyno Apple TV-ga oo ay jirto meel u dhow shabakadda WiFi.
Tani waxay muujineysaa in Apple Watch ay sameyn karto waxyaabo ka badan intii aan markii hore maleynay iyo waxaas oo dhan qaybtiisa koowaad. Maxay awood u yeelan doontaa mustaqbalka?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Maxaan sameyn karaa Apple Watch-ka la'aanteed iPhone-ka ku xiran shabakadda WiFi?
Haddii aad ubaahantahay inaad wanaajiso tayada isku xirka WiFi ee gurigaaga, awood u yeelo inaad maamusho boggaga internetka, siiso marin u helida shabakadaada kombiyuutarada aad u fog, u diyaarso meel kulkulul ganacsigaaga, ama la baashaal dhamaan fursadaha qaabeynta iyo cusbooneysiinta shirkado fara badan oo bilaash ah, 3Bumen Wall Breaker waa inuu noqdaa router-kaaga kugu xiga. Waan kugula talinayaa !!
Ku jawaab yeison quintero
Waxay u adeegtaa sidii kontoroolka fog ee kombiyuutarka? dijo
Waxaan rabaa inaan ogaado haddii saacadda Apple ay noqon karto kontoroolka fog ee kombiyuutarka? Bandhigyada, ama haddii uu jiro barnaamij sidan ugu shaqeeya iPhone-ka kombiyuutarka. Jawaab ayaan ka helayaa!
Jawaab u noqo inaad ugu adeegto kontoroolka fog ee kombiyuutarka?
Sida loo beddelo wallpaper iPad-ka